Hogaamiye Afrikaan ah oo loo heysto dilka xaaskiisa oo maanta maxkamad lasoo taagayo - BBC News Somali
Ra'iisul wasaaraha Lesotho iyo xaaskiisa hadda u dhexda
Booliska dalka Lesotho ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha dalkaas, Thomas Thabane, oo da'diisu ay tahay 80 sano jir maanta loo maxkamadeyn doona dilka xaaskiisi hore, Lipolelo Thabane.
"Booliska waxay hataan ka shaqeynayaan sidii maanta oo Jimca ah maxkamad loo soo taagi lahaa", ayay sheegeen booliska Lesotho.
Lipolelo oo ah xaaska la dilay
Sidoo kale taliye ku xigeenka booliska Lesotho, Paseka Mokete ayaa isna xaqiijiyay in ra'iisul wasaaraha maxkamad lasoo taagi doona maanta oo ay taariikhdu tahay 21-ka bisha Febraayo.
Mr Thabane oo la hadlay warbaahinta Qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay in dalkiisa uu ugu adeegay si hufan, xilkana uu ka degi doona bartamaha sanadkan, waxaana uu yiri: "Waxaan ka shaqeeyay Lesotho xasiloon oo nabad ah, da'da aan haatan joogana waxaa muuqto in aan daalay".
Maxaa hor taagan inay Taalibaan hesho ictiraaf caalami ah?